मनीषा कोइरालाको प्रश्न, 'यो नेपालीको सरकार नै हो ?' - Khula Patra
मनीषा कोइरालाको प्रश्न, ‘यो नेपालीको सरकार नै हो ?’
प्रकाशित समय: ०:३०:४१
काठमाडौँ। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आज राजधानीमा र्‍याली निकाल्ने क्रममा झडप भयो। प्रहरी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताबीच झपड भएको थियो। प्रहरीले सिंहदरबारस्थित पश्चिमी गेटमा रहेको पृथ्वीनारायणको सालिकमा माल्यार्पण गर्न रोक लगाएको थियो।
त्यही क्रममा राप्रपाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। प्रहरीले धरपकड गर्दै केही व्यक्तिमाथि लाठी प्रहार गरेको थियो।
उक्त घटनाप्रति अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले आपत्ति जनाएकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रहरीको उक्त कदमको विरोध गरेकी हुन्। नागरिक समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनी पनि सहभागी थिइन्। रत्नपार्कको शान्ति वाटिकाबाट शुरु भएको र्‍याली पृथ्वीनारायणको शालिकमा माल्यार्पण गर्न भन्दै सिंहदरबारस्थित पश्चिमी गेटतिर लागेको थियो तर प्रहरीले उनीहरूलाई शालिकमा माल्यार्पण गर्न दिएन।
आफूलाई माल्यार्पणसमेत गर्न नदिएको उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, “मैले आशा गरेकी थिए कि जनताको राष्ट्रिय एकताप्रतिको सामूहिक भावलाई सरकारले सम्मान गर्नेछ। तर उसको व्यवहार ठीक उल्टो देखियो। पृथ्वी नारायणको शालिकअगाडि नै सरकार को यो आपत्तिजनक कार्य? पानीको फोहरा र टियर ग्याससहित नै तैनाथ प्रहरीलाई पठाउने, सरकार के नेपालीको सरकार नै हो?”
राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा सरकारले देखाएको व्यवहार निन्दनीय भएको भन्दै उनले भनेकी छिन्, “सरकार र राजनीतिक नेताहरूले सभा वा भेला गर्न पाउने, आम जनताले राष्ट्र निर्माताप्रति एक भई श्रद्धाञ्जली दिन नपाउने? आमव्यक्तिको भेला हुने मौलिक अधिकार खोसेर सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छ।”